Mmerante ne Mmabaa—Mobɛyɛ Dɛn Asiesie Mo Ho Ama Daakye? | Adesua
“Ma w’ani nka Yehowa ho, na ɔbɛma wo nea wo koma pɛ.”​—DW. 37:4.
NNWOM: 89, 140
Gyinae bɛn na wubetumi asisi no seesei na ama w’ani agye daakye?
Sɛ aberante anaa ababaa de ne ho hyɛ bere nyinaa som adwuma no mu a, ntetee bɛn na onya?
Sɛ obi yɛ akwampae adwuma a, hokwan bɛn na ebetumi abue ama no?
1. Gyinae bɛn na ɛsɛ sɛ aberante anaa ababaa si wɔ ne daakye ho, na adɛn nti na ɛnsɛ sɛ ɔbɔ hu? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
MMABUN, ebia mubegye atom sɛ, sɛ wopɛ sɛ wutu kwan a, ɛyɛ papa sɛ wudi kan dwen ho hu baabi a wobɛkɔ. Abrabɔ te sɛ akwantu. Saa bere yi a woyɛ aberante anaa ababaa yi na ɛsɛ sɛ wudwen ho hu nea wode w’abrabɔ bɛyɛ. Ɛwom, ɛnna fam sɛ wobɛfa saa adwene no. Ababaa bi a wɔfrɛ no Heather kae sɛ: “Sɛ woresi gyinae afa nea wode wo daakye bɛyɛ ho a, ɛyɛ a wo yam tumi hyehye wo.” Nanso ka wo koma to wo yam. Yehowa ka kyerɛ ne nkurɔfo sɛ: “Mma w’ani nnyɛ wo totɔtotɔ, na mene wo Nyankopɔn. Mɛhyɛ wo den. Mɛboa wo.”​—Yes. 41:10.
2. Dɛn na ɛma wuhu sɛ Yehowa pɛ sɛ wusi gyinae a ɛbɛma w’ani agye daakye?
2 Yehowa tu wo fo sɛ dwen wo daakye ho yiye. (Ɔsɛnk. 12:1; Mat. 6:20) Ɔpɛ sɛ w’ani gye. Nneɛma a wabɔ no ma yehu saa. Ebi ne nea yehu, nea yɛte, ne nea yedi. Afei nso Yehowa dwen yɛn ho, na ɔkyerɛ yɛn nea yɛyɛ a ebesi yɛn yiye wɔ abrabɔ mu. Yehowa ka kyerɛ wɔn a wontie n’afotu sɛ: “Nea m’ani nnye ho na mopawee. . . . Hwɛ, me nkoa ani begye, na mo de, mo ani bewu. Hwɛ, me nkoa bedi ahurusi, koma pa nti.” (Yes. 65:12-14) Sɛ Yehowa asomfo sisi gyinae pa wɔ wɔn asetena mu a, ɛhyɛ no anuonyam.​—Mmeb. 27:11.
SI GYINAE A ƐBƐMA W’ANI AGYE
3. Gyinae bɛn na Yehowa pɛ sɛ wusi?
3 Sɛ woredwen wo daakye ho a, gyinae bɛn na Yehowa pɛ sɛ wusi? Sɛnea Yehowa bɔɔ nnipa no, ɔpɛ sɛ yehu no yiye na yɛde nokwaredi som no na ama yɛn ani agye. (Dw. 128:1; Mat. 5:3) Nnipa nte sɛ mmoa. Mmoa deɛ, wɔn de ara ne sɛ wobedidi, wɔbɛnom, na wɔawo. Nanso, Onyankopɔn pɛ sɛ wudwen nea ɛsen weinom ho na ama w’ani agye na w’asetena adi mu. Nea ɔbɔɔ wo no yɛ ‘ɔdɔ Nyankopɔn’ ne “anigye Nyankopɔn,” na ɔbɔɔ nnipa wɔ “ne suban so.” (2 Kor. 13:11; 1 Tim. 1:11; Gen. 1:27) Sɛ wusuasua yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ ɔdɔ no a, w’ani begye. Wode Bible asɛm yi ayɛ adwuma ahu sɛ ɛyɛ nokware anaa? Ɛka sɛ: “Ɔma mu wɔ anigye pii sen ogye.” (Aso. 20:35) Wei yɛ nokwasɛm turodoo. Enti sɛ woredwen wo daakye ho a, Yehowa pɛ sɛ wusi gyinae a ɛbɛkyerɛ sɛ wodɔ wo yɔnko nnipa ne Onyankopɔn.​—Kenkan Mateo 22:36-39.
4, 5. Dɛn na ɛmaa Yesu ani gyei?
4 Mmofra, Yesu Kristo atwa sa pa ato hɔ ama mo. Ɔyɛ abofra no, akyinnye biara nni ho sɛ odii agorɔ na ogyee n’ani nso. Onyankopɔn Asɛm ka sɛ ‘ɔserew wɔ ne bere, na ahuruhuruw nso wɔ ne bere.’ (Ɔsɛnk. 3:4) Bio nso, Yesu suaa Kyerɛwnsɛm no na ɛmaa ɔbɛn Yehowa. Bere a odii mfe 12 no, ‘sɛnea na n’adwenem dɔ na oyi nsɛm ano no,’ ɛmaa akyerɛkyerɛfo a wɔwɔ asɔrefie hɔ no ho dwiriw wɔn.​—Luka 2:42, 46, 47.
5 Yesu nyin bɛyɛɛ obi a ɔwɔ anigye. Dɛn na ɛmaa n’ani gyei? Ná onim sɛ ade baako a Onyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ, ‘ɔka asɛmpa kyerɛ ahiafo na ɔma anifuraefo hu ade.’ (Luka 4:18) Onyankopɔn apɛde a Yesu yɛe na ɛmaa n’ani gyei. Yɛhwɛ Dwom 40:8 a, yehu nea na ɛwɔ Yesu komam. Ɛhɔ ka sɛ: “Nea mepɛ ne sɛ mɛyɛ w’apɛde, O me Nyankopɔn.” Ná Yesu ani gye ho sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ nkurɔfo ne soro Agya no ho ade. (Kenkan Luka 10:21.) Da bi, Yesu ne ɔbea bi bɔɔ nokware som ho nkɔmmɔ. Owiei no, ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “M’aduan ne sɛ mɛyɛ nea ɔsomaa me no apɛde na mawie n’adwuma.” (Yoh. 4:31-34) Yesu kyerɛe sɛ ɔdɔ Onyankopɔn ne afoforo, na ɛmaa n’ani gyei. Wo nso woyɛ saa a, w’ani begye.
6. Nea wabɔ wo tirim sɛ wobɛyɛ daakye no, ɛyɛ papa sɛ wone Kristofo a wɔn ho akokwaw bɔ ho nkɔmmɔ. Adɛn ntia?
6 Kristofo pii yɛɛ akwampae adwuma wɔ wɔn mmabunbere mu, na ama wɔn ani agye. Adɛn nti na wo ne wɔn mmɔ wo tirimbɔ no ho nkɔmmɔ? Bible ka sɛ: “Wɔkwati atirimsɛm a tirimbɔ yɛ ɔkwa, na agyinatufo dodow mu na ebegyina.” (Mmeb. 15:22) Ebia saa anuanom yi bɛka akyerɛ wo sɛ, bere nyinaa som adwuma no bɛtete wo, na wubenya ntetee no so mfaso wo nkwa nna nyinaa. Yesu wɔ soro no, n’Agya kyerɛkyerɛɛ no. Anso hɔ ara. Yesu baa asase so no, ɔkɔɔ so suaa ade bere a ɔreyɛ ne som adwuma no. Osuaa sɛnea ɔbɛka asɛmpa no ma aka nkurɔfo koma ne sɛnea obekura ne mũdi mu wɔ sɔhwɛ mu. Wei maa n’ani gyei. (Kenkan Yesaia 50:4; Heb. 5:8; 12:2) Momma yɛnhwɛ bere nyinaa som adwuma no afã ahorow bi a ɛbɛma w’ani agye paa no bi.
WƆN A WƆYƐ ASUAFOYƐ ADWUMA NO, ESI WƆN YIYE​—ADƐN NTIA?
7. Adɛn nti na mmabun pii ani gye asuafoyɛ adwuma no ho?
7 Yesu kae sɛ: ‘Monkɔ nkɔyɛ asuafo, monkyerɛkyerɛ wɔn.’ (Mat. 28:19, 20) Sɛ woyɛ w’adwene sɛ wobɛyɛ asuafoyɛ adwuma no a, na worepaw adwuma a ɛma akomatɔyam paa. Saa adwuma no hyɛ Onyankopɔn anuonyam. Adwuma biara mu no, egye bere na wo ho akokwaw. Saa na asuafoyɛ adwuma no nso te. Bere a onua bi a yɛfrɛ no Timothy fii akwampae adwuma ase no, na onnya nnii mfe 20. Nnansa yi ara ɔkae sɛ: “M’ani gye ho sɛ mede me bere nyinaa resom Yehowa, efisɛ ɛno na mede kyerɛ sɛ medɔ no. Mifii ase no, na mintumi nyɛ Bible adesua. Nanso akyiri yi mitu kɔɔ asasesin foforo mu, na bosome baako pɛ mu no minyaa Bible adesua pii. Me Bible suani baako fii ase baa adesua. Afei mekɔɔ Bible Sukuu a Wɔyɛ Ma Anuanom Mmarima Asigyafo no bi. * Wɔde abosome mmienu na ɛyɛ sukuu no. Bere a miwiei no, wɔde me kɔɔ asasesin foforo mu, na seesei mafi Bible adesua nnan ase. Mekyerɛkyerɛ afoforo a, ɛma m’ani gye efisɛ mihu sɛ honhom kronkron resakra wɔn.”​—1 Tes. 2:19.
8. Dɛn na Kristofo mmabun bi ayɛ ama wɔatumi aka asɛmpa no akyerɛ nnipa pii?
8 Kristofo mmabun bi asua kasa foforo. Ɛho nhwɛso ni. Jacob fi North America, na ɔkae sɛ: “Bere a midii mfe nson no, na me sukuufo pii yɛ Vietnamfo. Ná mepɛ sɛ meka Yehowa ho asɛm kyerɛ wɔn, enti akyiri yi meyɛɛ m’adwene sɛ mesua wɔn kasa no. Nea na metaa yɛ paa ne sɛ, na mede Borɔfo Ɔwɛn-Aban no toto Vietnam deɛ no ho. Afei nso, na asafo bi bɛn yɛn a wɔka Vietnam kasa. Enti mehwehwɛɛ nnamfo wɔ hɔ. Midii mfe 18 no, mifii akwampae adwuma ase. Akyiri yi mekɔɔ Bible Sukuu a Wɔyɛ Ma Anuanom Mmarima Asigyafo no bi. Wei aboa me wɔ baabi a seesei meyɛ akwampae adwuma no, efisɛ mewɔ adesuakuw bi mu. Wɔka Vietnam kasa na me nko ara na meyɛ asafo mu panyin. Sɛ Vietnamfo pii hu sɛnea masua wɔn kasa no a, ɛyɛ wɔn nwonwa paa. Wogye me fɛw so, na ɛyɛ a mitumi ne wɔn yɛ Bible adesua. Wɔn mu bi anya nkɔso abɔ asu.”​—Fa toto Asomafo Nnwuma 2:7, 8 ho.
9. Sɛ obi yɛ asuafoyɛ adwuma no a, ntetee pa bɛn na onya?
9 Asuafoyɛ adwuma no tete wo ma wunya adwuma ho suban pa, wutumi ne afoforo di nkitaho yiye, wunya akokoduru, na ɛma woyɛ anifere. (Mmeb. 21:5; 2 Tim. 2:24) Ade baako a ɛma asuafoyɛ adwuma no yɛ anika paa ne sɛ, ɛboa wo ma wutumi de Kyerɛwnsɛm no kyerɛkyerɛ wo gyidi mu yiye. Afei nso ɛma wusua sɛnea wo ne Yehowa bɛbom ayɛ adwuma.​—1 Kor. 3:9.
10. Sɛ woreyɛ asuafoyɛ adwuma no wɔ asasesin a emu yɛ den mu mpo a, wobɛyɛ dɛn anya anigye?
10 Sɛ nnipa kakraa bi mpo na wotie asɛmpa no wɔ w’asasesin mu a, wubetumi anya anigye wɔ asuafoyɛ adwuma no mu. Ɛnyɛ ɔbaakofo na ɔboa obi ma ɔbɛyɛ osuani. Asafo no mufo nyinaa boa ma wɔhwehwɛ wɔn a wɔwɔ koma pa. Ɛwom, sɛ obi tumi bɛyɛ osuani a, ebia onua anaa onuawa baako pɛ na okohuu no, nanso asafo no nyinaa na ɛhwehwɛɛ no, enti wɔn nyinaa ani betumi agye. Yɛnhwɛ Brandon asɛm yi. Ɔde mfe nkron kaa asɛmpa no wɔ asasesin a emu yɛ den mu. Ɔkae sɛ: “M’ani gye sɛ mɛka asɛmpa no efisɛ ɛno ne adwuma a Yehowa aka sɛ yɛnyɛ. Miwiee sukuu no, ankyɛ na mifii akwampae adwuma ase. Sɛ mehyɛ mmerante a wɔwɔ yɛn asafo mu nkuran, na mihu sɛ wɔrenya nkɔso wɔ asafo no mu a, ɛma m’ani gye. Miwiee Bible Sukuu a Wɔyɛ Ma Anuanom Mmarima Asigyafo no, wɔmaa me asasesin foforo ma mekɔyɛɛ akwampae adwuma no wɔ hɔ. Ɛyɛ nokware, minnyaa obiara ne no nsuaa ade wɔ asasesin no mu mma ɔmmɔɔ asu, nanso ebinom atumi ayɛ saa. Ɛyɛ me dɛ sɛ mebɔɔ me tirim anaa misii gyinae sɛ mɛka asɛmpa no akyerɛ nnipa pii.”​—Ɔsɛnk. 11:6.
HOKWAN A EBETUMI ABUE AMA WO
11. Ɔsom adwuma bɛn na mmerante ne mmabaa pii de wɔn ho ahyɛ mu?
11 Yebetumi anya hokwan pii de asom Yehowa. Ɛho nhwɛso ne sɛ, mmabun pii tu wɔn ho ma sisi adan. Yehia Ahenni Asa bebree. Ahenni Asa a wosisi no yɛ ɔsom adwuma no bi. Ɛhyɛ Onyankopɔn anuonyam na ebetumi ama w’ani agye. Afei nso, sɛnea wo ne wo nuanom bom yɛ ɔsom adwuma no fã biara ma w’ani gye no, saa ara na wei nso te. Sɛ woboa ma wosisi adan a yɛde som Yehowa a, ɛno nso tete wo. Ɛma wuhu sɛnea wobɛyɛ ahwɛyiye bere a woreyɛ adwuma na woampira, ɛma wode nsi yɛ adwuma, na wutie wɔn a wohyɛ wɔn ase no.
Wɔn a wɔyɛ bere nyinaa som adwuma no nya nhyira pii (Hwɛ nkyekyɛm 11-13)
12. Ɔkwan bɛn so na akwampae adwuma no betumi abue hokwan foforo?
12 Onua bi a yɛfrɛ no Kevin kae sɛ: “Meyɛ abofra no, nea na esi m’ani so ara ne sɛ daakye mede me bere nyinaa bɛsom Yehowa. Enti midii mfe 19 no, mifii akwampae adwuma ase. Ná mede me bere kakra boa onua bi ma osisi adan sɛnea ɛbɛyɛ a menya biribi de atwitwa me ho. Misuaa sɛnea yɛbɔ dan so, yɛhyehyɛ mpomma, ne apon. Akyiri yi, mede mfe mmienu boaa atoyerɛnkyɛm bere mu aboafo, na yesiesiee Ahenni Asa ne anuanom adan a asɛe. Bere a metee sɛ wohia anuanom ma wɔaboa adansi adwuma wɔ South Africa no, mibisaa hokwan, na wɔfrɛɛ me sɛ menkɔboa. Afrika ha a mewɔ yi, yɛde nnawɔtwe kakra si Ahenni Asa baako wie a, na yɛkɔ foforo so. Kuw a me ne wɔn sisi adan no, yɛte sɛ abusua. Yɛte faako, yesua Bible bom, na yɛyɛ adwuma bom. Sɛ me ne anuanom a ɛwɔ hɔ no kɔ asɛnka nso a, m’ani gye. Ade a meyɛ abofra no mebɔɔ me tirim sɛ mɛyɛ no, mansusuw da sɛ ebetumi ama m’ani agye saa.”
13. Ɔkwan bɛn so na Betel som adwuma ma mmabun ani gye?
13 Ebinom bɔɔ wɔn tirim sɛ wɔde wɔn bere nyinaa bɛsom Yehowa. Wotuu ho anammɔn, na seesei wɔresom wɔ Betel. Wosom wɔ Betel a, w’ani gye efisɛ nea woyɛ wɔ hɔ biara, woyɛ ma Yehowa. Betel abusua no boa ma yɛn nsa ka honhom fam aduan. Dustin som wɔ Betel, na nea ɔkae ni: “Midii mfe nkron na mede bere nyinaa som adwuma no sii m’ani so. Enti miwiee sukuu no, mifii akwampae adwuma ase. Afe ne fã akyi, wɔtoo nsa frɛɛ me baa Betel, na misuaa sɛnea wɔde afiri a wɔde tintim nhoma yɛ adwuma. Akyiri yi misuaa sɛnea wɔyɛ kɔmputa so dwumadi ahorow. Esiane sɛ mewɔ Betel nti, sɛnea asuafoyɛ adwuma no rekɔ so wɔ wiase baabiara no, m’ani tua. Ɛyɛ me dɛ paa sɛ meresom wɔ ha, efisɛ nea yɛyɛ wɔ ha no boa nkurɔfo ma wɔbɛn Yehowa.”
WOBƐYƐ DƐN ASIESIE WO HO AMA DAAKYE?
14. Dɛn na wobɛyɛ de asiesie wo ho ama bere nyinaa som adwuma no?
14 Dɛn na wobɛyɛ de asiesie wo ho ama bere nyinaa som adwuma no? Ade a ebetumi aboa wo paa ma woasom Yehowa yiye ne sɛ wubenya suban pa. Enti fa nsi sua Onyankopɔn Asɛm, dwinnwen emu nsɛm ho kɔ akyiri, na bɔ mmɔden sɛ wobɛka wo gyidi ho asɛm wɔ asafo nhyiam ase. Sɛ woda so kɔ sukuu a, fa saa bere no sua sɛnea wobɛka asɛmpa no yiye. Sua sɛnea wubedwen afoforo ho; fa anifere bisa wɔn nsɛm na tie nea wɔbɛka. Afei nso, wubetumi atu wo ho ama na woayɛ nnwuma bi wɔ asafo no mu. Ebi ne sɛ wobɛboa ma wɔasiesie Ahenni Asa so ma ɛhɔ atew. Nnipa a wɔbrɛ wɔn ho ase na wotu wɔn ho ma saa no, Yehowa ani gye ho sɛ ɔde wɔn bɛyɛ adwuma. (Kenkan Dwom 110:3; Aso. 6:1-3) Ɔsomafo Paulo too nsa frɛɛ Timoteo sɛ ɔnkɔyɛ asɛmpatrɛw adwuma efisɛ ‘anuanom kaa ne ho asɛm pa.’​—Aso. 16:1-5.
15. Dɛn na wubetumi ayɛ na ama woanya adwuma ayɛ?
15 Ehia sɛ bere nyinaa asomfo dodow no ara yɛ adwuma de hwɛ wɔn ho. (Aso. 18:2, 3) Enti ebia wubetumi de bere tiaa bi akosua adwuma bi. Wei bɛma woanya adwuma a ennye wo bere pii ayɛ wɔ baabi a wowɔ no. Nea woabɔ wo tirim sɛ wobɛyɛ no, wo ne ɔmansin sohwɛfo ne akwampaefo a wɔwɔ wo mansin mu nsusuw ho. Bisa wɔn adwuma a ebetumi aboa obi ma wayɛ akwampae adwuma. Afei sɛnea Bible ka no, “dan wo nnwuma gu Yehowa so, na wo nhyehyɛe betim.”​—Mmeb. 16:3; 20:18.
16. Sɛ wode wo bere nyinaa som Yehowa wo mmabunbere mu a, sɛn na ebesiesie wo ama daakye?
16 Anigye a wubenya daakye no, nya awerɛhyem sɛ Yehowa pɛ sɛ ‘woso mu denneennen.’ (Kenkan 1 Timoteo 6:18, 19.) Sɛ woyɛ bere nyinaa som adwuma a, ɛma wo ne bere nyinaa asomfo foforo bɔ. Ɛno boa ma wutumi bɛyɛ Kristoni a ne ho akokwaw. Afei nso, nnipa pii ahu sɛ wɔn bere nyinaa a wɔde som Yehowa wɔn mmabunbere mu no aboa ma wɔanya aware pa. Wɔn a wɔyɛɛ akwampae adwuma ansa na wɔreware no pii atoa so ne wɔn ahokafo ayɛ akwampae adwuma no.​—Rom. 16:3, 4.
17, 18. Sɛ woredwen wo daakye ho a, wo koma ba mu sɛn?
17 Sɛ woredwen wo daakye ho a, wo koma ba mu bi. Dwom 20:4 ka Yehowa ho asɛm sɛ: “Ɔmma wo nea wo koma pɛ, na ɔmma wo tirimbɔ nyinaa mmra mu.” Enti nea wopɛ sɛ wode w’abrabɔ yɛ no, dwen ho yiye. Hwɛ nea Yehowa reyɛ wɔ yɛn bere yi so na hwɛ nea wubetumi ayɛ wɔ ne som mu. Afei bɔ wo tirim sɛ wobɛyɛ nea ɛsɔ n’ani.
18 Sɛ wode wo bere nyinaa som Yehowa a, ɛbɛma wo koma atɔ wo yam paa, efisɛ asetena a ɛte saa hyɛ Onyankopɔn anuonyam. Enti “ma w’ani nka Yehowa ho, na ɔbɛma wo nea wo koma pɛ.”​—Dw. 37:4.
^ nky. 7 Seesei Ahenni Asɛmpakafo Sukuu no abesi anan.
Cameron Reyɛ Adwuma a Ɛsen Adwuma Biara
Mmabun Bisa Sɛ—Ɛdɛn Na Mede M’asetena Bɛyɛ?